''ချစ်ကြိုက် ကွဲညား ဇာတ်လမ်းတွေက အရမ်းကြီးကို ရိုးနေပြီ။ မလုပ်ဖူးတာတွေပဲ လုပ်ချင်တော့တယ်''ြ? - Yangon Media Group
”ချစ်ကြိုက် ကွဲညား ဇာတ်လမ်းတွေက အရမ်းကြီးကို ရိုးနေပြီ။ မလုပ်ဖူးတာတွေပဲ လုပ်ချင်တော့တယ်”ြ?
သရုပ်ဆောင်မြတ်ကေသီအောင်၏ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ အနုပညာလောကအပေါ် ထင် မြင်ယူဆချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ယခုလိုပဲ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး – လတ်တလော အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ – အခုကတော့ ‘အထက်တန်းစား’ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ဖို့ရှိတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားမှာ အစ်မက နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့ အမျိုးသမီး။ ကိုနေတိုးကို တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်တဲ့ ကာရိုက်တာကနေပြီးတော့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရမယ်။
မေး – ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးတာ သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူးနော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။
ဖြေ – ဇာတ်ကားတွေသိပ်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကလေ လာကမ်းလှမ်းတဲ့ ဇာတ်ကား တော်တော်များများက နယ်တွေမှာရိုက်ရမယ့်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်နေတယ်။ အစ်မက နယ်တွေမလိုက်နိုင်ဘူး။ အခုလက်ခံထားတဲ့ အထက်တန်းစား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကလည်း ပထမတုန်းက နယ်ဘက်မှာသွားရိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ အစ်မလည်း နယ်ဘက်မှာသွားရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မရိုက် တော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ်။ နောက်သူတို့က အစ်မပါတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ရန်ကုန်မှာပဲ ပြန်ဖြတ်ပေးပါမယ် ပြောလို့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဇာတ်ကားတွေမရိုက်ကူးဖြစ်ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ကတော့ Facebook ပေါ်မှာတော့ တွေ့နေရတာဆိုတော့ အလှမ်းတော့ ဝေးမသွားပါဘူး။
မေး – နယ်မှာမရိုက်ဘူးဆိုတာက ဘာဖြစ်လို့လဲ။
ဖြေ – နယ်မှာမရိုက်ဘူးဆိုတာက ဘယ်လိုပြောရမလဲ အရင်တုန်းကတော့ အမေရှိတော့ အဆင်ပြေတယ်။ အခုကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူး။ အဲဒါကြောင့် မရိုက်ဖြစ်တော့တာပါ။
မေး – ဇာတ်ကားတွေလက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်ရင်လည်း ဇာတ်ကားတော်တော်များများမှာ ဗီလိန်ကာရိုက်တာတွေ ရိုက်ကူးတာများတယ်နော်။
ဖြေ – အစ်မက အဲဒီလိုမျိုးရိုက်ရတာကို သဘောကျတယ်။ အစ်မကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီလိုကာရိုက်တာမျိုးကိုပဲ လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒီလို ကာရိုက်တာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကလေ အငြိမ်ကာရိုက်တာထက် အသွက်ကာရိုက်တာကို ပိုလုပ်ချင်တာ။ အိုက်တင်ကို သွက်သွက်လက်လက် ပိုလုပ်ပြချင်တယ်။
မေး – အဲဒီလိုမျိုး ဗီလိန်ကာရိုက်တာတွေက ကိုယ်ရဲ့အနုပညာပိုင်းကို ပိုပြီးတော့ချပြခွင့်ရတယ်လို့ ပြောလို့ ရမလား။
ဖြေ – ဟုတ်တယ်။ အစ်မတို့က မင်းသမီးတန်းထဲက ဇာတ်ကားတွေရိုက်လာတာဆိုတော့ ချစ်ကြိုက် ညားကွဲဆိုတာက အစ်မတို့အတွက် အရမ်းကြီးကိုရိုးနေပြီ။ အဲဒါကြောင့် မလုပ်ဖူးတဲ့ကာရိုက်တာ မျိုးတွေကိုပဲ လုပ်ချင်တော့တယ်။
မေး – အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအများကြီးလည်း ရိုက်ကူးလာတဲ့အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲ။
ဖြေ – ကောင်းပါတယ်။ အစ်မတို့ခေတ်တုန်းကဆိုရင် အကယ်ဒမီစာရင်းဝင်တဲ့ဇာတ်ကားက တစ်ရာနီးပါးပဲလေ။ အဲဒီအခါကျတော့ ရင်ခုန်ရတယ်။ အခု ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ သုံး လေးကားလောက်ပဲ ဒရာမာရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်သူရမလဲသိတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ခံစားရတာအောက်တာပေါ့နော်။ အခုဆိုရင် ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးကိုရိုက်ကူးလာတဲ့အခါကျတော့ တစ်နှစ်ကိုဇာတ်ကား ၅ဝ ရိုက်လာရင် အဲဒီဇာတ်ကား ၅ဝ စလုံးမှာပါတဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေအကုန်လုံး ရင်ခုန်လို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဇာတ်လမ်း ကောင်းဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်။ ပရိသတ်အကြိုက် လိုက်လုပ်ပြန်တော့လည်း ပေါကားဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ ထိန်းဖို့လိုတယ်။
မေး – အခုနောက်ပိုင်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ စာရေးတာ သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူးနော်။
ဖြေ – ရေးတော့ရေးမှာ။ ရေးလိုက်တိုင်း လူတွေက သူ့ထင်သလိုလို ငါ့ထင်သလိုလို ရည်းစားဟောင်းတွေကလည်း သူရေးတယ်ထင်။ ဒီတစ်ယောက်ကလည်း သူ့ရေးတယ်ထင်။ ယောကျာ်းဟောင်းကလည်း သူရေးတယ်ထင်တော့ ကိုယ်ကဘယ်သူ့မှရေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလိုစွပ်စွဲနေကြတာများလို့ ခဏနားထားတဲ့သဘာပါ။
မိုဘိုင်းဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ရေး ပြည်တွင်းအခွန် ပြင်ဆင်နေ
''ခံစားချက်ထည့်ပြီး အရမ်း ဟာသ မဟုတ်တဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးတွေက ညီမနဲ့ ပိုလိုက်တယ်။ ပိုလုပ်နိုင်တ
ဖီဖာ၏ ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အသင်း သုံးဆင့် ကျဆင်း
ဘားအံမြို့တွင် သံလွင်မြစ်ရေ လေးကြိမ်မြောက် တက်လာပြီး လူဦးရေ ၉၆၇၁ ဦး ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများသ?
ဟနွိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ရခြင်းမှာ အမေရိကန်အပေါ် မယုံကြည်၍ဟု မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင?